Guuldareysiga: Sirta Guusha
Sabti, Agoosto 28, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Markaad fursad hesho, qaado nuqul ka mid ah Guuldareysiga: Sirta Guusha waxaa qoray saaxiibkiis Robby Slaughter. Robby wuxuu diyaariyey hage weyn guuldareystay si aad wax uga barato ugana koroto guuldaradaada. Ma samayn karo buugga caddaalad - waxaa jira sheekoyin aan caadi ahayn oo ka imanaya qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu waaweyn ee warshadaha.
Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago qaar ka mid ah xigashooyinka fashilka Buugga si aan kuugu dhiirrigeliyo:
Aqoonta laga kasbaday guuldarrooyinka ayaa inta badan gacan ka geysta gaaritaanka guulaha xiga. Erayada ugu fudud, guuldaradu waa macalinka ugu dambeeya. David Garvin
Waxaan seegay in ka badan 9,000 oo tallaal xirfadayda. Waxaan lumiyay ku dhawaad ​​300 oo kulan. Lix iyo labaatan jeer, ayaa laygu aaminay inaan qaato darbada ciyaarta oo aan seegay. Waxaan ku guuldareystay marar badan iyo in kabadan noloshayda. Taasina waa sababta aan u guuleysto. Michael Jordan
Guul darradu waxay hoosta ka xarriiqeysaa baahida loo qabo in fursado la qaato. Cliche waa sax: Haddii aadan khatar gelin, wax abaalmarin ah ma jiri doonto. Hadana haddii aad khatar galineysid, ku dhowaad qeexitaan ahaan, waad ku guul darreysaneysaa mar uun. Jeff Wuorio
Maan guuldaraysan 10,000 jeer. Waxaan si guul leh kuhelay 10,000 oo wado oo aan shaqeyn doonin. Thomas Edison
Ma jiro qof aan ku farxi karin daahfurka khaladaadkiisa u qalma in loogu yeero aqoonyahan. Donald Foster
Guul darradu waa fursad si dib loogu bilaabo mar kale, markan si caqli badan. Henry Ford
Khabiirku waa qof sameeyay dhamaan khaladaadka lagu samayn karo goob aad u cidhiidhi ah. Neils Bohr
Waxaan kaliya ku gaari karnaa horumarka cajiibka ah ee teknoolojiyada iyada oo loo marayo guuldarrooyin badan. Takeo Fukui
Kuwa guuleysta waxay u muuqdaan kuwa iyagu u oggolaanaya naftooda inay fashilmaan. Chris Brogan iyo Julien Smith
Xeer # 1: waa inaad barataa inaad ku guuldareysato, inaad guuleysato. David Sandler
Waa kuwan fiidiyow cajiib ah oo ka socda Honda oo isku magac ah, oo ka hadlaya guuldaradii Honda sanadihii oo dhan.
Dalbo nuqul ka mid ah Guuldareysiga: Sirta Guusha oo hubi inaad fiiriso qoraalada socda ee Robby ee uu ku leeyahay bartiisaKa gaabinta.
Tags: guuldareysigaguulsirta guusha
Nambarada Telefoonka ee Hyperlink ee loogu talagalay Daalacashada Mobilada
Suuqgeyntaadu Ma Sharci Darrobaa?
Aug 30, 2010 at 7: 54 AM
Waxaan rumeysanahay inay run tahay oo keliya hoggaamiyeyaasha Warshadaha, laakiin hoggaamiyeyaasha guud ahaan. Hogaamiyayaashu way fashilmaan.
Tusaale ahaan, wuxuu waayey shaqadiisa, wuxuu bilaabay biz isaga u gaar ah wuuna ku fashilmay. Waxaa looga adkaaday, tartan, afhayeenka aqalka, senate-ka gobolka. Waxaa looga adkaaday isku daygii magacaabista ee Congress, Guurtida iyo Madaxweyne kuxigeenka. Wuxuu ku guuleystay kursiga congress-ka markaa dib looma magacaabin! Wuxuu ku dhacay cillad dhanka neerfaha ah ka dibna waxaa loo diiday inuu noqdo sarkaal dhul dowladeed ah. Mar labaad, waxaa looga adkaaday tartan Senate ah. Ma uusan quusan. Wuxuu ahaa Abraham Lincoln.
Sep 6, 2010 at 11: 50 AM
Si uun Google Alerts ugama digin tan si dhakhso leh, laakiin mahad Doug!